Buug uu qoray Bolton ayaa lagu sheegay in Trump uu weydiistay Xi inuu ka taageero dib… – Hagaag.com
Buug uu qoray Bolton ayaa lagu sheegay in Trump uu weydiistay Xi inuu ka taageero dib…
Posted on 18 Juunyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Buug uu qoray lataliyihii hore ee ammaanka qaranka Madaxweyne Donald Trump , ayaa buuq badan ka abuuray Aqalka Cad , waxaana socda dadaalo Aqalka cad ku doonayo in uu uga hortago daabacaada buugaasi.
Buuggan oo cinwaan looga dhigay “Qolka ay wax ka dhaceen” “The Room Where It Happened”ayaa waxaa qoray John Bolton oo soo noqday lataliyihii amaanka Qaranka ee Madaxweyne Trump, waxa uuna buugan soo bandhigayaa xogo badan oo dadka ka qarsoon.
Qoraha buugan ayaa soo bandhigaya xogo badan aysan jecleysan Aqalka Cad in la baahiyo, waxaana xogahaasi kamid ah codsi Madaxweyne Trump u diray Madaxweynaha Shiinaha uuna ka codsanayay in uu ka taageero dib u doorashadiisa.
Xogaha lagu soo bandhigay buugan ayaa walaac badan ku abuureen Madaxweynaha Mareykanka iyo saaxiibada ku dhow dhow ee ku sugan Aqalka Cad.
Aqalka cad ayaa horey u sheegay in buugan lagu faafinayo siro culus ay qalad tahay in bulshada lala wadaago sidaa awgeedna muhiim tahay in buuga meesha laga saaro, hasa ahaatee waxaa dalabka Aqalka Cad kasoo horjeestay John Bolton.
Buuggan oo si weyn loo wada sugayo xogaha ku qoran ayaa lagu wadaa in lagu kala iibsado suuqyada 23-ka bishan, waxaana Aqalka Cad wali ku dadaalayaa sidii loo joojin lahaa si uusan saameyn ugu yeelan dib u doorashada madaxweyne Trump.